इतिहास | NayaBishwo.com
‘मानिसको अन्तराष्ट्रिय जात हुन्छ’ भन्दै कम्युनिस्ट नेताले कसिला मुठ्ठी कसेर भाषण गरेको देखेका रविन्द्रले छुवाछूतको विरोध गरे। शास्त्रीय मर्म बुझेको पण्डित परिवारमा हुर्केका रविन्द्र अधिकारी १२ वर्षको उमेरमै कम्युनिष्ट राजनीतिमा होमिए। २०३८ सालमा सात कक्षा अध्ययन गर्दा अनेरास्ववियुको कान्छो सदस्यका रूपमा कम्युनिष्ट पार्टीको सपथ खाए। अधिकारीले राजनीति प्रवेश गरेपछि कहिल्यै ‘ब्याक’ हुनु परेन। राजनीतिले उनलाई विद्रोह गर्न सिकायो। कक्षा सातमा पढ्दै हलो जोतेर पण्डित परिवारको पगरी हटाइदिए। दलितको घरभित्र बसेर खानेकुरा खाँदा उनले घरबाट निष्काशन हुनुप¥यो। यसले उनको विद्रोही चेतनाले… पुरा पढौ
६९ औं प्रजातन्त्र दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ। एक सय चार वर्ष लामो जहानियाँ राणाशासन अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन फागुन ७ को स्मरणमा आज ६९ औँ प्रजातन्त्र दिवस देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। जनक्रान्तिका माध्यमबाट २००७ सालमा मुलुकबाट राणा शासन अन्त्य भएको थियो। राणा शासन अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाईन्छ। प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै अहिले मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ। प्रजातन्त्र दिवस मूल… पुरा पढौ
बागलुङ नगरपालिका ४ ओडारचौरका माधवप्रसाद शर्मा (एमपी शर्मा) ले भारतबाट तत्कालिन विद्रोही माओवादीलाई हतियार ओसार पोसारमा सहयोग गर्थे । उनी सन् १९८३ मा भारत संचार निगम लि. गोरखपुरमा कार्यरत थिए । अखिल भारत नेपाल एकता समाजको सदस्य बनेका उनले त्यति बेलादेखि नै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आए । त्यहाँ रहेको कम्युनिष्टहरुसँग उनको हिमचिम थियो । सन् २००० मा उनी अखिल नेपाल भारत समाजको केन्द्रिय सदस्य बने त्यहि बेलामा उनीमाथि एउटा मुद्धा लाग्यो । त्यहाँको कम्युनिष्टसँग मिलेर नेपालमा रहेका माओवादीलाई… पुरा पढौ
यस्तो थियो जनयुद्ध घोषणाा गर्दा जारी पहिलो अपिल
काठमाडौं, नेपाली राजनीतिमा एउटा सबैभन्दा बढी बहस र चर्चा बटुलेकाे एेतिहासिक अवधि थियाे जनयुद्ध । माअाेवादकाे दार्शनिक अालाेकमा विकास भएकाे सशस्त्र संघर्षकाे पहिलाेपटक घाेषणा गर्दा जारी अपील यस्ताे थियाे । आदरणीय जनसमुदाय, आज नेपाली समाज आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हरेक दृष्टिले भयावह सङ्कटको स्थितिमा छ । पचासौं वर्षदेखि विकास र निर्माणका कुरा गरेर नथाक्ने वर्तमान सत्ताले नेपाललाई आर्थिक रूपले कहाँ पुर्यायो ? त्यसले नेपाललाई इथोपियापछिको संसारकै दरिद्र देशको स्तरमा पुर्यायो । आत्मनिर्भर एवम् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिशामा सियोसम्म नबनाउने यो राज्यसत्ताले आज देशको… पुरा पढौ
किन विक्री भएनन् जर्मन तानाशाह ‘हिट्लरका पेन्टिङ्ग’
नाजी नेता एडोल्फ हिट्लरले बनाएको भनिएका पाँचवटा पेन्टिङ्ग जर्मनीमा गरिएको एउटा लिलाम बढाबढमा विक्री हुन सकेनन्।लिलाम बढाबढ गर्ने केन्द्र वाइडलरले पेन्टिङ्गहरूको लिलाम बढाबढको शुरूवाती मूल्य ५१ हजार अमेरिकी डलर तोकेको थियो।जर्मनीको नुरमबर्गमा लिलाम बढाबढको आयोजना गरिएको थियो, जुन शहर कुनैबेला हिटलरका बृहत् र्‍यालीहरूका लागि कुख्यात थियो।र, पछि सोही शहरमा ठूला नाजी नेताहरूमाथि युद्ध अपराधका मुद्दाहरू चलाइएका थिए। तोडमरोड तोडमरोड गरिएको आरोपहरूका कारण लिलाम बढाबढ विफल हुन पुग्यो र नगर प्रमुखले वर्तमान अवस्थाका लागि उक्त लिलाम बढाबढ "असुहाउँदो भएको" बताएका छन्।नाजी… पुरा पढौ
कार्ल मार्क्सको चिहानमा तोडफोड
लन्डनस्थित कार्ल मार्क्सको चिहानमा तोडफोड भएको छ। अज्ञात समूहले हथौडाको सहायतामा माक्र्सको चिहानमा क्षति पुर्याएका हुन्। माक्र्स अर्थशास्त्री, इतिहास जानकार, समाजशास्त्री तथा दार्शनिक थिए। कम्युनिजम दर्शन अर्थात् बामपन्थी विचारधाराका पिताका रुपमा माक्र्सलाई चिन्ने गरिन्छ। उनको विचार र दर्शन विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरुले पछ्याउँदै आएका छन्। सन् १८१८ मे ५ मा जर्मनीमा जन्मिएका माक्र्स आफ्नो क्रान्तिकारी विचार र अभिव्यक्तिका कारण देश छाडेर वेलायतको लन्डन पुगेका थिए। १८८३ मार्च १४ मा लन्डनमा उनको निधन भएको थियो। उनको चिहानपनि लन्डनै निर्माण गरिएको थियो। १९५४… पुरा पढौ
इजिप्टको चिहानमा भेटिए दुई हजार वर्षअघिका ५० मम्मीहरु
इजिप्टमा हालै भेटिएको नयाँ चिहानमा दुई हजार वर्षअघिका ५० मम्मी लाशहरु फेला परेका छन्।राजधानी काइरोदेखि दक्षिणको मिन्यास्थित ऐतिहासिक स्मारक क्षेत्र टुना इल–गबेल साइटमा ती हजारौं वर्ष पुराना मम्मीहरु फेला परेका हुन्।परातत्व विधहरुका अनुसार ती लाशहरु ३०५ देखि ३० बिसीका हुन्। जसमध्ये १२ बालबालिका तथा दश जनवारका समेतका लाश छन्।ती लाशहरु काठ तथा ढुंगाका कफिनमा रहेको जनाइएको छ। ९ मिटर गहिरो दफन कक्षको ६ कोठाहरुमा ती मम्मी लाशहरु फेला परेका हुन्। ती लाशहरु धनाढ्य र शासक वर्गको भएको अनुमान गरिएको छ।यस्ता… पुरा पढौ
प्राचीन चिहानमा एकअर्कातिर किन फर्किएको होला महिला र पुरुषको अस्थिपञ्जर
झन्डै ४५ सय वर्षअघि एक महिला र एक पुरुषलाई संसारकै एउटा पुरानो नगरीय सभ्यता भएको मानिने प्राचीन हडप्पाको एउटा बस्तीबाहिर रहेको समाधिस्थलमा गाडिएको थियो। सन् २०१६ मा भारत र दक्षिण कोरियाका पुरातत्त्वविद् र वैज्ञानिकहरूले यी दुर्लभ अस्थिपञ्जर फेला पारेका थिए। अस्थिपञ्जर भेटिएको स्थान अहिले उत्तर भारतीय राज्य हरियाणाको राखीगढी गाउँमा पर्छ।ती महिला र पुरुषको समयक्रम र मृत्युको सम्भावित कारणबारे दुई वर्षसम्म अध्ययन गरियो। वैज्ञानिकहरूले गरेको अनुसन्धान अहिले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित भएको छ। अनुसन्धान टोलीको नेतृत्व गरेका पुरातत्त्वविद् वसन्त शिन्देका… पुरा पढौ
काठमाडौँ । आज २९७ औँ पृथ्वी जयन्ती । पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदैछ । यता, समाजिक सञ्जाल पनि पृथ्वी जयन्तीको विषयमा विभिन्न टिप्पणीहरुले रङ्गिएका छन् । हेरौँ कसले के लेखेः केपी ओली नेपालीले पाएको स्वतन्त्र, सार्वभौम, राष्ट्रका गौररवशाली नागरिकको आत्मसम्मानको श्रेय पृथ्वीनारायण शाहलाई । उनले नेपाल भौगोलिक एकीकरण गरी भाषिक, जातीय, सांस्कृतिक लगायतका अनेक विविधताका बीच मजबुत एकताको आधार तयार गरे । बाबुराम भट्टराई नेपालको भौगोलिक एकीकरणमा अग्रणि व्यक्तित्व पृथ्वीनारायण शाहको २९७ औँ जयन्तिको सन्दर्भमा सबैमा हार्दिक शुभकामना… पुरा पढौ
काठमाडौं, २७ पुस । आजकै दिन हो पृथ्वीनारायण शाहले खण्डित रुपमा रहेका ५२ वटा भन्दाबढि स-सना राज्यहरुलाई एकीकरण गरेर आधुनिक नेपाल निर्माण गरेको । आजको दिनमा आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई लिएर नेपाली समाज विभक्त भएको देखिन्छ । तर यो आवश्यक होईन । यो त अनावश्यक किचलो हो । कुनैपनि परिवर्तमा केही क्षती हुन्छ । कम्जोर पक्षमाथि दबाबमा पर्छ । शक्तिशालीले दबाबउन खोज्छ । यो परिर्वतनको बिशेषता हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । तथापी शाहको स्थानमा अरु कोही भएको भएपनि उसले… पुरा पढौ